warkii.com » Tani Waa Sababta Atariishada Disha Patani Ku Kalliftay In Aysan Jecleysan Xafladaha Bollywood-ka
Tani Waa Sababta Atariishada Disha Patani Ku Kalliftay In Aysan Jecleysan Xafladaha Bollywood-ka
Atariishada ku cusub shirkadda aflaanta Bollywood Disha Patani ayaa daaha ka qaaday inay markasta doorbido in aysan ka qeybgelin xafladaha heerka sarre ah ee ay ku kulmaan xiddigaha ka xamaasha shirkadda aflaanta Bollywood.
28 sanno jirtaan Disha Patani ayaa tilmaantay in aysan xiiseyn inay socoto goordambe oo habeenkii ah. Sidoo kale atariishadaani ma jecla in dadku ay isla dhexmaraan arrimo xan ah oo ku saabsan nolosheeda gaarka ah marka ay habeenkii ka baxdo gurigeeda.
Filimkii MS Dhoni: The Untold Story ayey kusoo gashay Bollywood, Disha Patani ayaa sidoo kale tilmaantay in aysan ku dhiiran isticmaalka baraha bulshada. Kuna darso ma isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya.
“Kama qeybgalo xafladaha loogu dabaaldegayo aflaanta, sidoo kale waan kasoo horjeedaa isticmaalka baraha bulshada. Waxaa intaas sii dheer in aanan cabin waxyaabaha maanka dooriya.
“Sababta ugu weyn ayaa ah in aanan bixin habeenkii, ma garan karo waxa igu dhici doona haddii aan aado xafladaha habeenkii, xanta soo bixi doonta ayaana ka walwalayaa. Waxay ila tahay wax sirgaxan inaan baxo habeenkii”.